Fiteny gezy : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Fiteny gezy : Fahasamihafan'ny versiona roa
Fiteny gezy (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 7 Jiona 2019 à 11:49
18 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 7 Jiona 2019 à 11:46 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 7 Jiona 2019 à 11:49 (hanova) (esory)
Ny '''fiteny gezy''' na '''geezy''', izay atao hoe '''fiteny etiopiana tranainy''' na '''fiteny etiopiana klasika''' dia [[fiteny hamito-semitika]] ao amlin'ny fianakaviam-[[Fiteny semitika|piteny semita]] notetenina hatramin'ny taonjato faha-4 ao amin'ny [[Tandrok'i Afrika]] ary nipoitra avy ao amin'ireo faritra ao atsimon'i [[Eritrea]] sy ao avaratr'i [[Etiopia]]. Ny fiteny gezy dia fiteny ofisialin'ny Fanjakan'i Aksoma avy eo an'ny Fanjakan-dehiben'i Etiopia. Araka ny fanadihadiana tany aloha dia renin'ny ankamaroan'ny fiteny maro izy, nefa tsapa ankehitriny fa mitovy tantana amin'ireo fiteny ireo izay niara-nivoatra taminy izy. Soratana alin'ny abidim-baninteny gezy ny fiteny gezy. Atao hoe ግዕዝ / ge'ez io fiteny io fiteny io amin'ny fiteny gezy.
Ankehitriny dia fiteny fototra ampiasaina amin'ny [[litorjia]]<nowiki/>n'ny [[Fiangonana etiopiana ortodoksa teoahedo]] sy ny an'ny [[Fiangonana eritreana ortodoksa teoahedo]] ny fiteny gezy, isan'ireo mampiasa azy koa ny vahoaka jiosy [[Beta Israely]]. Ao Etiopia anefa dia ny [[Fiteny amharika|fiteny ahmarika]] (izay fiteny ifaneraseran'ny mponina ao Etiopia ankehitriny) sy any Eritrea ary ao amin'ny faritr'i Tigray any Etiopia, ny [[fiteny tigrinia]] sy ny fiteny hafa koa dia ampiasaina amin'ny fitorian-teny.
Ny fiteny tigrinia sy ny fiteny tigre dia mety manam-pifandraisana hentitra amin'ny fiteny gezy. Misy anefa ny mpahay teny sasany izay mihevitra fa ny fiteny gezy dia tsy nipoiran'ireo fiteny etiopiana ankehitriny fa nippoitra amin'ny sampana izay tafasaraka tany aloha kokoa tamin'ny fiteny tranainy izay tsy fantatra fa eritreretin'ny manampahaizana, ary mety azo heverina ho fiteny mitovy tantana sady mitovy fipoirana amin'ny fiteny tigrinia. Ny mpanampahaizana etiopiana ahitana an-dry Amsalu Akilu dia manantitra ny maha maro anisa kokoa ny anarana nolovana izay tsy niova fanonona sy soratana mitovy na amin'ny fiteny gezy na amin'ny fiteny ahmarika (ary koa amin'ny fiteny tigrinia, na dia vitsy kokoa aza izany).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/971205"